Rag lagu xukumey xabsi daa'in oo dacwaddooda dib loo eegey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Mid ka mid ah ragga la xukumey . Sawirkii : Polisens förundersökningsprotokoll.
Rag lagu xukumey xabsi daa'in oo dacwaddooda dib loo eegey
La daabacay tisdag 8 mars 2016 kl 13.41
Maxkamadda Svea Hövrätt ayaa maanta dib u eegeysa laba qof oo magaalada Göteborg ku noolaa kuwaas oo horey xabsi daa’im loogu xukumey dil argagixiso raad ku leh oo ay ka geysteen dalka Suuriya gudihiisa.
Labadaas nin ayaa inkirsan in ay danbigaas galeen waxayna dalbanayaan in la sii daayo.
Dhallinyaro afar ah oo kale kuwaas oo da’doodu u dhaxeyso 25 jir ilaa iyo 30 jir ayey maxkamaddu xukun ku ridey iyagoo aan goobjoog aheyn kuwaas oo lagu eedeeyey in ay caawimaad ka geysteen dilal la geystey.
Danbi baaraha falkaan gacanta ku haya ayaa laga soo xigtey in la hayo filim muujinaya laba qof oo madaxa laga jarayo, waana caddeynta maanta la horgeynayo maxkamadda.
Samir waa walaal kor uga weyn mid ka mid ah afarta qof ee la waayey, waana kan isagoo ka hadlaya walaalkiis :
-Qof caadi ah ayuu ahaa sida aniga iyo adiga oo kale, dadka halkaan fadhiya ayuu la mid ahaa waxna ugama duwaneyn, ayuu yiri Samir.
Ilaa iyo hadda lama oga meesha ay ku sugan yihiin raggaan danbiyada lagu tuhunsan yahay lakiin qoysaskooda ayaa sheegaya in ay heleen warar sheegaya in wiilashoodii la diley sidaas oo ay tahayna ilaa iyo hadda war cad oo sugan arrinkaas lagama hayo.
Hay’adaha dalkaan Iswiidhan ayaan nimankaan ku tirineyn in ay dhinteen maadaama wax xaqiijiya aan la heyn ,sidaas daraadeed waxay adduunka oo dhan ku baahiyeen in raggaas la soo qabto,loona soo gacan galiyo.
Samir ayaa waxaa ku adag in uu fahmo ama uu liqo eedeymahaas :
-Xaqiiqda ayaan isweydiinayaa ,sida tusaale ahaan sidee wax u dheceen, xagee waxaani ka dheceen ,ma isagaa falkaas geystey ,su’aalahaas oo dhan ayaan isweydiinayaa waxaana rabi lahaa in aan jawaab u helo si aan u dago, ayuu yiri Samir oo runtii isagu magac kaleeto leh.